The Google Pixel Slate bụ ọrụ: atụmatụ nke mbadamba ọhụrụ a | Gam akporosis
Google Pixel Slate Google di ugbua: anyi na agwa gi ihe obula!
Aaron Rivas | | Noticias
Taa bụ njem Google na-atọ ụtọ. Gbaso ihe ngosi na nso nso a nke Google Pixel 3, yana ndị a abụọ ìgwè na-abịa ọhụrụ mbadamba, ndị Echere Pixel, nke a ga-eji asọmpi na Apple iPads na Microsoft Surface site na ụlọ ọrụ Bill Gates.
Otu ọhụrụ a abịa na ebumnuche nke inwe ike itinye na keyboard ma jikọta Chrome OS, Ma ọ gwụbeghị. Nnukwu G arụ ọrụ ya nke ọma, ya mere, ọ ga-ekwe omume na anyị na-eche ọganihu ọhụrụ nke ụlọ ọrụ America. Ihe a niile ga-adabere na mmepe ya na nnabata ya na ahịa. Anyị na-agwa gị nkọwa nke mbadamba nkume ọhụrụ a!
Google Pixel Slate na-abịa na Chrome OS, dị ka ọtụtụ akwụkwọ ndetu Pixelbooks. Nke a na-egosi ọgbọ ọhụụ n'ime mbadamba ụlọ ọrụ ahụ. Cheta na Pixel C, nke ewepụtara n’oge dị anya gara aga, jiri gam akporo dịka sistemụ arụmọrụ, yabụ na Pixel Slate bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị iji banye na akaụntụ mgbe ịzụrụ ekele maka OS a na-adọrọ mmasị.
Mgbe Chrome oS ọ nwere ike na-agba ọsọ Android ngwa ọdịnala na egwuregwu na n'oge gara aga, n'ihi na a mgbe o nwere, ya mere na-arụpụta ihe ngwakọ na sistemụ arụmọrụ zuru oke. Agbanyeghị na interface Chrome OS egosighi na kachasị maka igwe mmetụ dị ka gam akporo, Google na-ekwe nkwa mmelite na ngalaba a, nke anyị ga-anwale n'oge na-adịghị anya.
1 Google Pixel Slate: ihe eji eme ihe ma di nma
2 Ọnụahịa na nnweta
Google Pixel Slate: ihe eji eme ihe ma di nma
Google gbalịrị iwetara anyị mbadamba ihe eji arụ ọrụ nke ọma. Pixel Slate bụ ihe si na ụlọ ọrụ ahụ na-eme, na nwata na-egosi ya, dị ka mbadamba ụrọ a dị mma nke ọma na aka. Ihe a nile na-agbadata n'otu ihe: Pixel Slate nwere ezigbo ogo nke njegharị. Bụlagodi, Ngwurugwu ndị dị na mbadamba a adịghị warara dị ka anyị ga-atụ anya ya, ọ bụ ezie na ha karịrị nke akpọrọ Pixel C. Nke a nwere ekele.
N'aka nke ozo, ihe ohuru a biara na ihe nkowa di nma, dika 12.3-anụ ọhịa ihuenyo ọ na-abịa na, nke nwere ike ịnye mkpebi nke pikselụ 3.000 x 2.000 na njupụta nke 293 ppi. Ihuenyo a dakọtara na Stylus, nke a ga-ere iche iche, yana keyboard ya. Na mgbakwunye, na usoro nke nhazi ya, ọ na-abịa na ọgbọ 3th Intel Celeron, Intel Core M5, Intel Core i7 ma ọ bụ i4 dị ka obi, nke a na-esonyere 8, 16 ma ọ bụ 32 GB nke RAM yana 64, 128, 256 ma ọ bụ XNUMX GB nke ebe nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa site na microSD.
Banyere ngalaba foto, na Pixel Slate nwere a n'azụ na n'ihu igwefoto na 8 MP mkpebi, nke nwere ọrụ yiri nke ọhụrụ Pixel 3, dị ka HDR +. Ihe mmetụta dị n’azụ nwere oghere f / 1.9 na ndekọ vidiyo 1.080p, ebe ihu nwere otu oghere. E wezụga na, o nwere a mkpisiaka agụ agụ na eku nke ihuenyo.
Banyere nkọwa ndị ọzọ, ọ tụrụ 202 x 290 x 7mm, na-atụle 721 gram na O nwere batrị 48 WHr, nke nwere ike inye nnwere onwe nke aka elekere 12. Na mgbakwunye, ọ gụnyere Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.2, mmegharị aka, onye na-ekwu okwu ihu abụọ na ọdụ ụgbọ USB Type-C 3.0 abụọ.
Ọnụahịa na nnweta
Maka ugbu a, enwere ike ịzụta Google Pixel Slate na United States. Ọnụ ego mbụ ya dị na dollar 599 (~ 521 euro) wee rute dollar 1.599 (~ euro 1.390), dabere na iche. N'ezie, anyị ga-eburu n'uche na nke a bụ ego nke mbadamba naanị, ebe Pixel Slate Keyboard, nke bụ keyboard nkịtị, na-ere iche iche maka ihe dịka $ 199 (~ 173 euro) na Pixelbook Pen, nke bụ pensụl, ihe dị ka dollar 99 (~ 86 euro).
Google Pixel Slate na Intel Celeron SoC nwere 4 GB na 32 GB: $ 599 (~ euro 521)
Google Pixel Slate na Intel Celeron SoC nwere 8 GB na 64 GB: Dollar 699 (~ euro 607).
Google Pixel Slate na Intel Core M3 SoC na 8 GB na 64 GB: Dollar 799 (~ euro 694).
Google Pixel Slate na Intel Core i5 SoC na 8 GB na 128 GB: Dollar 999 (~ euro 868).
Google Pixel Slate na Intel Core i7 SoC na 16 GB na 256 GB: Dollar 1.599 (~ euro 1.390).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Pixel Slate Google di ugbua: anyi na agwa gi ihe obula!
Foto Google Live Albums ga-ebugo foto gị kachasị mma na Home Hub
Habemus Google Pixel 3 na 3XL: nnukwu G na-aga ihe niile na nnyemaaka na foto